စွေ့ (နို့တိုက်သတ္တဝါ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် စွေ့ ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
စွေ့ (အင်္ဂလိပ်: Tree shrew or Banxrings) သည် ရှဉ့်နှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူပြီး မျိုးနွယ်မတူသော နို့တိုက်သတ္တဝါငယ် တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ စွေ့သည် တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့၏ ဒေသရင်းမျိုးစိတ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းဒေသများရှိ ရွက်ပြတ်တောများနှင့် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောများတွင် နေထိုင်ကျက်စားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပါဏဗေဒအလိုအရ မျိုးစိတ် (၁၉)မျိုး ပါဝင်သည့် "တူပိုင်ဒီး(Tupaiidae)" မျိုးရင်း နှင့် မျိုးစိတ် တစ်ခုတည်းသာ ပါဝင်သည့် "တီလိုဆာဆစ်ဒီး (Ptilocercidae)" မျိုးရင်းဟူ၍ မျိုးရင်း အဆင့် အုပ်စု (၂)ခုဖြင့် "စကန်ဒန်းသျှား (Scandentia)" ဟူသော မျိုးစဉ် အဆင့်ရှိ နို့တိုက်သတ္တဝါ အုပ်စုအဖြစ် စွေ့ မျိုးနွယ်များအား မျိုးရိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားလေသည်။
စွေ့များတွင် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူသား အပါအဝင် အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများထက် အချိုးအစား ပိုကြီးသော ဦးနှောက်ပါရှိကြသည်။
နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ မျိုးစဉ်များထဲတွင် စွေ့ မျိုးစဉ်သည် ပရိုင်းမိတ် မျိုးစဉ်နှင့် မျိုးရိုးနီးစပ်မှုရှိသဖြင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် ၎င်းတို့အား ပရိုင်းမိတ်များနေရာ၌ အစားထိုးစမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုသော တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်လည်း အသုံးချလေ့ရှိသည်။
၅.၁ စွေ့ မျိုးစိတ်များ
စွေ့ များ၏ သွား ဖွဲ့စည်းပုံ။
မဒ္ဒရပ် စွေ့ (Anathana ellioti)
မြောက်ပိုင်းအွေ့ မြီးရှည်(Dendrogale murin)
မြောက်ပိုင်း စွေ့ (Tupia belangeri)
ရိုးရိုး စွေ့ (T. glis)
ဟော့စဖီး စွေ့ (T. javanica)
စွေ့ငယ်လေး (T. minor)
စွေ့ များတွင် ရှည်လျားသော အမြီးနှင့် ပျော့ပျောင်းပြီး မီးခိုးရောင် (သို့) နီညိုရောင်ရှိသော အမွေးများရှိကြသည်။ မြေပြင်ပေါ်တွင် နေထိုင်သော စွေ့ မျိုးစိတ်များသည် အပင်ပေါ်နေသော မျိုးစိတ်များထက် အရွယ် ပိုကြီးမားပြီး ၎င်းတို့၏ အဓိက အစာဖြစ်သော အင်းဆက်ပိုးကောင်များကို ရှာဖွေတူးဖော်ရာ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ခြေသည်း/လက်သည်း ရှည်များရှိကြသည်။
စွေ့များသည် အမြင်အာရုံအလွန်ကောင်းပြီး အချို့မျိုးစိတ်များ၌ မှန်ဘီလူးကဲ့သို့ ပုံရိပ်ချဲ့နိုင်သည့် မျက်လုံးများပင်လျှင် ပါရှိကြသည်။
စွေ့ အမများ၏ ကိုယ်ဝန်ချိန်ကာလသည် ရက်ပေါင်း ၄၅ ရက် မှ ၅၀ အတွင်းဖြစ်သည်။ သစ်ခေါင်းပေါက်များအတွင်း အရွက်ခြောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသိုက်များ၌ မွေးဖွားကြပြီး သားပေါက် (၃)ကောင်အထိ မွေးဖွားတတ်သည်။ စွေ့ အကောင်ပေါက်လေးများသည် မွေးကင်းစတွင် မျက်စိမမြင်နိုင်သည့်အပြင် ခန္ဂာကိုယ်ပေါ်တွင်လည်း အမွေးအမျှင်မပါပဲ ကြွက်ပေါက်ကလေးများကဲ့သို့ လုံးတီးဖြစ်၏။ သို့ပါသော်လည်း မွေးဖွားပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် အသိုက်မှ စွန့်ခွာသွားတတ်ကြသည်။ ထိုကာလအတွင်း မိခင် စွေ့ အမသည် တစ်ရက်ခြား တစ်ကြိမ်လျှင် မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ မိမိရင်သွေးအား ပြုစုစောင့်ရှောက်လေ့ရှိကြသည်။
စွေ့ ငယ်များသည် အသက် လေးလခန့်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်သည့် အရွယ်သို့ ရောက်ရှိကြသည်။ မျိုးစိတ်အများစု၏ မျိုးပွားလေ့ရှိသည့် ရာသီကာလ အပိုင်းအခြားအား ယနေ့တိုင် တိတိကျကျ မသိနိုင်သေးဘဲ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သားပေါက်လေ့ရှိသည်ဟုသာ အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ထား၏။
စွေ့ များသည် မိသားစုအုပ်စုငယ်လေးများအနေဖြင့် စုပေါင်း၍ နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြား သတ်မှတ်၍နေထိုင်လေ့ရှိကြပြီး အခြားအုပ်စုများမှ ကျူးကျော်လာပါက ဝိုင်းဝန်း တုံ့ပြန် ကာကွယ်လေ့ရှိသည်။
စွေ့ အများစုသည် နေ့ အချိန်သာ သွားလာကျက်စားသည့် မျိုးစိတ်များဖြစ်ကြပြီး စွေ့မြီးသွယ် ကဲ့သို့ မျိုးစိတ်အချို့မှာမူ ညဉ့် အချိန် ကျက်စားကြသည်။
စွေ့ များသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါငယ်များ၊ သစ်သီးများနှင့် သစ်စေ့များကို စားလေ့ရှိကြသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ စွေ့ မျိုးစိတ်အချို့သည် သဘာဝအတိုင်း အချဉ်ပေါက်နေသော ပန်းဝတ်ရည် (အရက်ပါဝင်မှု ၃.၈ %) အမြောက်အမြားကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးကြသည်ဟု သိရသည်။
Scandentia (စွေ့ မျိုးစဉ်)
Dermoptera (မျောက်လောင်းပျံ မျိုးစဉ်)
Primates (ပရိုင်းမိတ် မျိုးစဉ်)
Madras treeshew, A. ellioti
Bornean smooth-tailed treeshrew, D. melanura
Northern smooth-tailed treeshrew, D. murina
Northern treeshrew, T. belangeri
Golden-bellied treeshrew, T. chrysogaster
Banka Island treeshrew, T. discolor
Striped treeshrew, T. dorsalis
Mindanao treeshrew, T. everetti
Sumatran treeshrew, T. ferruginea
Common treeshrew, T. glis
Slender treeshrew, T. gracilis
Javan treeshrew, T. hypochrysa
Horsfield's treeshrew, T. javanica
Long-footed treeshrew, T. longipes
Pygmy treeshrew, T. minor
Mountain treeshrew, T. montana
Nicobar treeshrew, T. nicobarica
Palawan treeshrew, T. palawanensis
Painted treeshrew, T. picta
Kalimantan treeshrew, T. salatana
Ruddy treeshrew, T. splendidula
Large treeshrew, T. tana
Pen-tailed treeshrew, P. lowii
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 104–109။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Rines၊ George Edwin (ed.)။ "Tree-shrew"။ Encyclopedia Americana (1920 ed.)။
↑ an article on Tupaia belangeri။ Washington University။ 1 June 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 May 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The tree shrews: Adjuncts and alternatives to primates as models for biomedical research" (2003). Journal of Medical Primatology 32 (3): 123–130. doi:10.1034/j.1600-0684.2003.00022.x. PMID 12823622.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Martin၊ Robert D. (1984)။ Macdonald၊ D. (ed.)။ The Encyclopedia of Mammals။ New York, NY: Facts on File။ pp. 440–445။ ISBN 978-0-87196-871-5။
↑ Tiny tree shrew can drink you under the table (2008)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စွေ့_(နို့တိုက်သတ္တဝါ)&oldid=746652" မှ ရယူရန်
၉ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။